Delta (ihe omume) (Naruto) - Magazin ADL ➡
Delta (ihe omume) (Naruto)
Delta (ihe omume)
Uta ル Der (Deruta)
“Ihe Njikọ Dị n'Otu”
Boruto # 197 (Lelee Online)
Boruto Isi # 30
Nwere ike 02, 2021
"Delta”(Akwụkwọ nsọ, Deruta) bụ ihe omume 197 nke Boruto: Naruto ndị na-esote anime.
Kawaki kpebiri idozi ite ite o mebiri. Himawari na -etinye okooko osisi na ite ite Kawaki zụtara. Ọ hụrụ Kawaki ka ọ na -achọ ka e kegide ite ite ya ọnụ. Ọ na -eche na ime nke a enweghị isi, Himawari na -ekelekwa ya maka ịzụrụ ite ite ọhụrụ, chọta ya nke ọma. Boruto na -ege ha ntị. Koji na -ekiri Kawaki site na toad ya, wee na -eche maka nzọụkwụ ya ọzọ. Koodu na -ajụ Amado gbasara ebe Jigen nọ. Amado kọwara Jigen na -agbake ma rịọ ka ọ ghara inwe nsogbu. Ọ na -agwa Koodu na ọ na -aga na faịlụ Kawaki na -achọ ihe ga -egosi na onye nrara nwere ike nweta ha, ma na -ekerịta nchegbu ya gbasara ịdị jụụ Jigen na mpụta nke pụtara na ụgbọ mmiri ahụ. Koodu na -emesi ya obi ike na Jigen ka na -etinye ego nke ukwuu na Kawaki, ebe ọ kpọtụrụ aha na ọ gaghị ekwe omume ịgbanahụ Jigen, n'agbanyeghị na ọ ghọtaghị ihe nke ahụ pụtara. Ọ na -atụ aro na Jigen amaralarị onye onye sabo, nke na -akpasu Amado iwe maka ịrụ ọtụtụ ọrụ n'efu. Amado rịọrọ Koodu ka ọ lelee Boro, na -emesi ya obi ike na Jigen ga -enwe obi ụtọ.
Mgbe Koodu jụrụ maka Koji, Amado kwuru na Delta abanyelarị, wee jụọ onwe ya ihe Koji na -eme. N'ịbụ onye àgwà Koji kpasuru iwe, Delta na -ebuga drone nledo ya, enweghị chakra pụtara na ọ gaghị enwe mmetụta. N'agbanyeghị iro dị n'etiti ha, Boruto kwetara inyere Kawaki aka ịmatakwu gbasara Kama, na -achọpụta na arụmụka ya ziri ezi. Naruto na -ege ha ntị. Ya na Himawari na -ekiri Boruto na Kawaki na -eme ka Kama ha wee malite ịlụ ọgụ. Naruto na -akọwara Himawari ikike Kawaki. N'ịbụ onye nwere afọ ojuju na arụmọrụ Boruto, Kawaki gbara ya mgbawa, na -achọ ka ọ were Kamma ya. Boruto emeghị otú ahụ, mana ọ naghị afụ ụfụ nke ukwuu. Site na mgbachapụ ọkụ, Naruto mere ka ha mee akara nkwekọrịta. Ha abụọ na -enwe ihe mgbu n'aka ha, Boruto nwekwara ọhụụ nke Momoshiki. Site na toad ya, Koji hụrụ aka Boruto ka ọ na -agwọ ma tụọ nkọ na ya. Delta chọtara Kawaki site na drone ya, wee kpebie inweta ya n'onwe ya. N'iji ụgbọelu n'ụkwụ ya, na -efegharị n'ime obodo. Ndị otu Konoha Barrier na -achọpụta ya, Ino na -adọ Naruto aka na ntị. Ọ na -enye ya ntụziaka. Koji hụrụ Delta na -efe efe. Naruto dọrọ ụmụaka aka na ntị banyere ihe egwu na -abata ma chọọ ka ha pụọ. Delta bịarutere tupu ha apụọ.
Na Yamanaka Ryoka Yuzuki 柚木 涼 香 Yuzuki Ryoka
Onye ọrụ Team Barrier Sara Matsumoto 松本松本 Matsumoto Sara
Echefula isoro ndị enyi gị kerịta ibe a na Facebook & WhatsApp! #Delta #ihe ngosi?
Kedu akụkụ nke 1 acre?
Ego cubic ole dị na tank galọn 1000?